Amaxabiso ethu axhomekeke kwimveliso nganye esekelwe kumzobo wabathengi / isampuli, izinto eziphathekayo kunye ne-qty.
Sihlala sihlala sikhuphisana.
Ewe, siyamkela zombini i-qty encinci kunye nenkulu.Kodwa kwi-qty encinci, kukho i-MOQ esekwe kwinkqubo yokuvelisa eyahlukileyo.
Ngaba uyazenza iiprototypes?
Ewe, senza iiprototypes zomthengi ngokusekelwe kwisixhobo esilula ngokukhawuleza.
Ewe, ngokwesiqhelo senza iisampulu kuqala ukuze siqinisekise umthengi.Emva kokuvunywa kwesampulu, siya kuqalisa imveliso yobuninzi.
Ngaba unganikezela ngamaxwebhu afanelekileyo okanye iingxelo zovavanyo?
Ewe, sinokubonelela ngeengxelo zokuhlolwa kwezinto zekhemikhali zezinto eziphathekayo, iipropathi zomatshini, iingxelo zetsimbi kunye neengxelo zobungakanani kwisampulu nganye kunye nokuthunyelwa.Ukuba enye ingxelo iyadingeka, siya kubonelela ngokuhambelana nezivumelwano zabathengi.I-PPAP iyafumaneka ngesicelo.
Ixesha lesampulu elikhokelayo lokuphosa kunye neendawo zokubumba ziqhelekile kwiiveki ezi-4-6.Kwaye ixesha lokukhokela imveliso iiveki ezi-4.
Kwaye kumacandelo omatshini we-CNC kunye neengxenye zokwenza, ixesha lokukhokela isampuli ziiveki ezi-2-4.Kwaye ixesha lokukhokela imveliso iiveki ezi-3-4.
Ukuba amaxesha ethu okukhokela akasebenzi kunye nomhla wakho obekiweyo, nceda ujonge iimfuno zakho ngentengiso yakho.Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho.Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenjenjalo.
Ukulungiselela izixhobo kunye neendleko zesampulu, ixesha lokuhlawula lidla ngokuba yi-70% yentlawulo ephantsi kunye ne-30% kwisampulu evunyiweyo nguT/T.
Ukuhlawula imveliso, i-50% intlawulo ephantsi kwangaphambili, i-50% yentlawulo yokugqibela ngaphambi kokuthunyelwa.
Kuthekani ngokupakishwa kunye nokuhanjiswa kweemveliso?
Sisoloko sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle.Siyila ubungakanani bokupakisha obuhlukeneyo kunye nezinto ezixhomekeke kwiimveliso ezahlukeneyo kunye neemfuno zabathengi.Ikhathoni, i-plywood case/ipallets, kunye neepallets zentsimbi ziqhele ukusetyenziswa.
Iindleko zokuthumela ngenqanawa zixhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukufumana iimpahla.I-Express yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa ikwabiza kakhulu.Ngokuthuthwa elwandle sesona sisombululo sisixa esikhulu.Ngokuchanekileyo amaxabiso omthwalo sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela.Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ukuphosa ubhedu, Stamping Supplier, iStainless Steel Investment Casting Supplier, Amacandelo Extrusion Precision, Amacandelo okugaya i-Stainless Steel Cnc, Isitampu ngokweSiko,